Sida loo isticmaalo oo loogu daro isticmaaleyaasha Telegram adigoon lahayn lambar taleefan | Madasha Mobile -ka
Eder Ferreno | 18/10/2021 16:00 | Shabakadaha Bulshada, telegraam
Telegram waa mid ka mid ah codsiyada farriimaha ugu caansan adduunka, run ahaantii waa kan ugu weyn ee kula tartamaya WhatsApp. Waa app u taagan asturnaantiisa, iyo sidoo kale si joogto ah u soo bandhigida shaqooyin cusub. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ama astaamaha ugu waaweyn ee ay leedahay waa taas waxaan adeegsan karnaa Telegram annaga oo aan haysan lambar taleefan. Tani waa wax shaki la'aan xiiseynaya isticmaaleyaal badan.
Isticmaalayaal badan baa raadiya ogow sida ay suurtogal u tahay in la isticmaalo Telegram taleefan la'aanmaadaama ay tahay wax aad dhawaan maqashay markii ugu horreysay, tusaale ahaan. Nidaamkani ma aha mid adag oo hoos ayaan kaaga sheegi doonnaa. Waa hab wanaagsan oo lagu heli karo arjigan fariimaha. Intaa waxaa dheer, waxaad ku dari kartaa dadka adigoon wax dhibaato ah qabin, si ay suurtogal u noqoto in lala sheekeysto.
Waxaa muhiim ah in la ogaado natiijada suurtogal in la isticmaalo app -ka adiga oo aan haysan telefoon. In kasta oo aan iska diiwaangelinno mar walba waxaan u baahan doonnaa taleefan. Tan iyo mar kasta oo aan galno macmiilka Telegram, taleefanka su'aasha lahu wuxuu heli doonaa koodh xaqiijin. Si kale haddii loo dhigo, waxaan u baahanahay lambar la xiriira koontada si uun, in kasta oo lambarka taleefankaas uusan muhiim u ahayn adeegsiga arjiga.
Lambarka taleefanka looma baahna si loogu daro ama loola hadlo isticmaaleyaasha kale Telegram. Tani waa wax ka dhigaysa adeegsiga dalabka gaar ahaan mid raaxo leh, maadaama isticmaaleyaal badani aysan ku qanacsanayn inay siiyaan lambarkooda taleefan dadka kale ama aysan rabin inay dadka kale arkaan. Barnaamijkan farriinta waxaan kaga fogaaneynaa dhibaatadan, maadaama ay jirto hab loo adeegsado iyada oo aan loo baahnayn in xogtan la muujiyo.
1 Magaca isticmaalaha ee Telegram
2 Telegram ka samee magac -adeegsade
3 Qari lambarka taleefankaaga
4 Ku dar isticmaale Telegram
Magaca isticmaalaha ee Telegram
Telegram wuxuu leeyahay hab noo saamaxaya inaan adeegsanno app -ka taleefan la'aan. Xulashadani waa magaca isticmaalaha, kaas oo u shaqeeya si la mid ah magaca isticmaalaha ee shabakadda bulshada. Taasi waa, qof kasta oo ku jira app -ka ayaa naga raadin kara isagoo adeegsanaya magaca isticmaalaha sidaasna noo bilaabaya inuu nala sheekeysto, isagoo aan haysan ama garanayn lambarka taleefankeenna. Waa wax dad badani xoogaa gaar ahaan u qarsoon yihiin, sababtoo ah waxay u tixgeliyaan lambarka taleefanka inuu yahay xog xasaasi ah, oo aysan rabin inay wadaagaan haddii aysan ahayn wax dhab ahaan lagama maarmaan ah.
Adigoo isticmaalaya magaca isticmaalaha halkii aad ka isticmaali lahayd lambarka taleefanka, waxaan u adeegsan karnaa app -ka dhibaato la'aan. Ma lahaan doonno wax xaddidan isticmaalka Telegram ee taleefanka casriga ah. Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan qabanno shaqooyinkii aan caadiyan qaban jirnay: diridda farriimaha, wicitaannada ama wicitaannada fiidiyaha, waxaas oo dhan oo leh wadar caadi ah. Isticmaalayaal badan oo ku jira Telegram waxaa loo soo bandhigay inay yihiin lakab asturan oo dheeri ah, taas oo ka dhigaysa adeegsiga codsigan xitaa mid raaxo leh, tusaale ahaan.
Magaca isticmaalaha waa wax aan adeegsan karno markaan ku leenahay akoon app. Furitaanka koonto arjiga waxay nooga baahan doontaa inaan isticmaalno lambarka taleefanka, si aan u xaqiijinno aqoonsigeenna. Markaan ku abuurnay koontadan Telegram, waxaan u adeegsan karnaa nambar taleefan la'aan. Magaca isticmaalaha ayaa beddeli doona magacaas adeegsadaha sida ay dadka kale awood ugu yeelan doonaan inay wax ka raadiyaan ama nagala soo xiriiraan abka.
Telegram ka samee magac -adeegsade
Sidaad u malayn karto, waxa ay tahay inaan samayno markaa waa in lagu abuuro magaca isticmaalaha koontadayada Telegram. Markaan ku abuureyno koonto app -ka, qasab ma aha in la yeesho Alias ​​ama username, sidaa darteed dad badan ayaan weli haysan mid. Si kastaba xaalku ha ahaadee, tillaabooyinka lagu abuurayo ayaa aad u fudud, si qof walba u yeesho Magacan. Waa wax aan ku qaban karno labadaba taleefankeena iyo Telegram Desktop (nooca desktop -ka ee appka). Tallaabooyinka la raacayo kiiskan waa:
Telegram ka fur taleefankaaga.
Guji saddexda xariijimood ee jiifa ee dhinaca bidix ee shaashadda si aad u muujiso menu -ka dhinaca appka.
Guji Alias ​​-kaaga qaybta Xisaabta.
Haddii ay dhacdo inaadan lahayn Alias, geli midka aad rabto inuu ahaado username ama Alias.
Hubi haddii la heli karo.
Tani waa tallaabada ugu horreysa ee hawshan, marka waxaan hore u haysannay magacaas adeegsadaha. Waa tallaabada ugu horreysa ee la raaco si aad awood ugu yeelatid inaad Telegram adeegsato adiga oo aan lahayn lambar taleefan. Marka la abuurayo magacaas adeegsadaha, waxaa wanaagsan in uu yahay magac fudud, in adeegsadayaasha kale ay awoodi doonaan inay raadsadaan dhib la'aan, iyo inay tahay hab wanaagsan oo lagu garto, taas oo ah, inay si fiican noo habboon tahay. App -ka ayaa noo oggolaanaya inaan beddelno Magacaas markii aan rabno, sidaa darteed haddii muddo ka dib aadan ku faraxsanayn, waxaad u beddeli kartaa mid kale oo ka wakiil badan, tusaale ahaan.
Qari lambarka taleefankaaga
Waxaan rabnaa in magaca adeegsaduhu uu noqdo habka ay adeegsadayaasha kale ee Telegram noo heli doonaan oo nala soo xiriiri doonaan. Taas micnaheedu waa inaan qarinaa lambarka taleefankeena arjiga dhexdiisa, si uusan qofna u awoodin inuu u adeegsado inuu na helo, marka lagu daro sameynta xogtan qofna uma muuqan. Tani waa wax aad u fudud oo aan awoodi doonno inaan ku dhex samayno codsiga farriinta laftiisa. Waa kuwan tillaabooyinka ay tahay inaan raacno:
Guji saddexda xariijimood ee jiifa ee bidixda si aad u muujiso menu -ka dhinaca appka.
Geli qaybta Asturnaanta iyo Amniga.
Guji ikhtiyaarka Lambarka Taleefanka.
Xulo inuusan qofna arki karin lambarka taleefankaaga.
Haddii aad rabto in laga reebo, ku qor ikhtiyaarka qaybtan.
Anagoo qarinayna lambarka taleefoonka waxaan samaynaynaa marka Aynu ku isticmaalno Telegram moobilkayaga lambar la'aan. Magaca isticmaalaha ayaa noqon doona dariiqa aan isku aqoonsanno oo aan ku ogaan karno codsiga farriinta caanka ah ee Android iyo iOS. Marka lagu daro soo bandhigida lakabka asturnaanta dheeraadka ah ee arjiga, taas oo ah cunsur kale oo muhiim u ah isticmaaleyaal badan.
Marka qof uu kula sheekaysto barnaamijka dhexdiisa oo uu aado astaantayada si uu u arko macluumaadkayaga, lambarka taleefanka lama soo bandhigi doono. Haddii uusan qofkaasi ka mid ahayn kuwa aan reebnay, qofna ma arki doono lambarka taleefankan marka uu nala sheekeysto. Sidoo kale ma awoodi doonaan inay na raadiyaan iyagoo adeegsanaya xogtan, haddii ay isku dayaan baaritaanku ma bixin doono natiijooyin, taas oo muujinaysa inay tani tahay wax si fiican u shaqeeyay.
Ku dar isticmaale Telegram
Su'aal ay adeegsadayaal badani qabaan waa haddii aan Telegram adeegsanaynno taleefan la'aan, haddii habkii lagu dari lahaa xiriirada xisaabtayada uu isbedelo. Geedi socodku waa isku mid marka la eego arrintan. Markaan ku raadineyno isticmaaleyaal kale dalabka waxaan ku sameyn karnaa dhowr siyaabood, isla xulashooyinkii aan helnay ilaa hadda. Waxaad heli kartaa qof kale oo isticmaalaya taleefan lambarka ama magaca isticmaalaha (haddii ay ku leeyihiin koontadooda).
Xitaa haddii aad isticmaaleyso Telegram lambar lambar la'aan, xiriirada ku jira buugga taleefankaaga ee adeegsada Telegram weli waa la soo bandhigay. Waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto qaybta Xiriirada ee ku jirta menu -ka dhinaca ee arjiga. Intaa waxaa dheer, mar kasta oo mid ka mid ah dadka aad la xiriirto uu ku soo biiro app -ka, waxaad heli doontaa ogeysiis kugu wargelinaya arrintaas. Markaa waxaad awoodi doontaa inaad had iyo jeer ka warqabto haddii qof hore u isticmaalayay barnaamijkan farriinta taleefankiisa. Dadkani sidoo kale si otomaatig ah ayaa loogu dari doonaa xiriiradaada abka.
Haddii aad rabto inaad qof ka hesho Telegram, si loogu daro dadka aad la xiriirto, waxaad ku samayn kartaa laba siyaabood. Waxaad geli kartaa lambarka taleefanka qofkan ka dibna si toos ah ugu dar kuwa aad la xiriirto, sidii inaad ku dari lahayd xiriir buugga taleefankaaga. Waa geedi socod isku mid ah oo ku saabsan arrintan, markaa wax dhibaato ah ma yeelan doontid. Dhanka kale, Telegram -ka waxaad ku adeegsan kartaa magaca isticmaale ee qofkan oo ka dhex raadin kartaa barnaamijka. Adigoo gujinaya astaanta muraayadda weyneysa waxaan samayn karnaa baaritaanno, oo ay ku jiraan raadinta qof gaar ah. Markaa waan geli karnaa magacaas adeegsadaha waxayna noo horseedi doontaa qofkan. Markaa waxaan ku bilaabi karnaa wada sheekeysi iyaga oo ku dhex jira barnaamijka.
Haddii ay tahay qof aan rabno inaan la xiriirno, waxaan ku leenahay goobaha wada sheekaysigaas suurtagalnimada in lagu daro qofkan ama koontada xiriirada. Habkan waxaan awood u yeelan doonnaa inaan la hadalno markasta oo aan rabno, maadaama ay mar horeba u badbaadeen sidii xiriiriyaha ajendaha barnaamijka. In kasta oo aan u isticmaalno Telegram anigoon lahayn lambar taleefan, haddana sida wax loogu daro ama loola xiriiro dadka kale ee ku jira barnaamijka isma beddelo. Haddii kuwa kale rabaan inay na raadiyaan, waxay isticmaali karaan oo keliya magaca adeegsadaha ee aan abuurnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Shabakadaha Bulshada » Sida loo isticmaalo oo loogu daro isticmaaleyaasha Telegram iyadoon lahayn lambar taleefan